Fikarohana momba ny firaisana Xenoglossy-Unlearned Language: Tantaram-piainana Tantaran'ny Gretchen Gottlieb | Dolores Jay - Fikarohana momba ny vatana
Ahoana no nahatonga izany? Hypnosis na fadiranovana
Article by: Walter Semkiw, MD, from Teraka indray: tranga tany am-boalohany nateraky ny porofo momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny raharaha Xenoglossy notadiavin'i Ian Stevenson
Nandritra ny Hypnosis na ny famerenana amin'ny fiainana taloha, Gretchen, toetran'ny fiainam-pahaterahana taloha, dia mitombo
Carroll Jay dia ministera kristiana metodista izay nanomboka nampihatra hypnose tao amin'ny 1954, tamin'ny voalohany mba hanampiana ny olona hanamaivana ny alahelony. Tao amin'ny 1960 dia nanomboka nanandrana ny famerenana ny fiainany izy.
Dolores, ny vadiny, dia narary lamosina ary tamin'ny 10 Mey 1970, Carroll dia nanao fivoriana hypnosis tamin'ny tanjona hanala ny fanaintainan'ny vadiny. Rehefa, tamin'ny hypnosis, dia nanontany an'i Dolores i Carroll hoe: "Maharary ve ny lamosinao?" hoy ny navaliny tamin'ny teny alemà, "Nein," izay midika hoe "Tsia." (1)
Tamin'ny May 13, 1970, tao amin'ny fivoriana hypnosis hafa dia hoy i Dolores tamin'ny teny alemà: "Ich Bin Gretchen," izay midika hoe "Izaho Gretchen." (2)
Nandritra ny fotoam-pivavahana hypnosis natao nandritra ny volana vitsivitsy, dia niverimberina i Gretchen ary niteny alemà. Taorian'ny fivoriana 10, nasaina handray anjara tamin'ny fivoriana iray izay nanam-bava tamin'i Gretchen tamin'ny teny alemà ny mpandahateny Alemana. Tamin'ny April 23, 1971, nanoratra ny teny 40 tamin'ny teny alemà i Dolores nandritra ny fisehoan'i Gretchen.
Ny mahaliana, ny fahasamihafana nataon'i Gretchen dia tsy mitovy amin'ny sora-tànan'ny Dolores Jay. Tsy voatery hitoetra toy izany ny sora-tanana raha tsy misy ny sora-tanana hafa.
Tsy nianatra teny alemana intsony i Dolores ary tsy azony ny fiteny alemà tao amin'ny fahatsiarovan-tena mahazatra. Noho izany dia miteraka tranganà xenoglossy izany, izay ahafahan'ny olona miteny fiteny izay tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra. Araka ny resahina etsy ambany, dia heverina ho porofo mivaingana momba ny vatana vaovao indray ny xenoglossy.
Xenoglossy: Ian Stevenson, MD Validates Gretchen dia miteny anglisy
Rehefa naheno an'i Ian Stevenson, sary an-kavanana, naheno momba ity raharaha xenoglossy ity, dia nandeha tany amin'ny Mt. Orab, Ohio, izay niainan'ny Jays, mba hikaroka ilay raharaha. Tamin'ny Septambra 2, 1971, Stevenson, izay nahalala ny teny alemà, dia nandray anjara tamin'ny fivoriana ary nifampiresaka tamin'ny Dolores tamin'ny teny alemà. Stevenson dia nandefa olona miteny miteny alemà maromaro handray anjara amin'ny sehatra hypnose izay nipoitra an'i Gretchen ary nifampiresaka taminy tamin'ny teny Alemana ihany koa.
Tamin'ny March 25, 1974, dia tonga tao amin'ny laboratoara Ian Stevenson tao amin'ny Oniversiten'i Virginia i Dolores. Dr. Stevenson sy mpiara-miasa iray, Ramatoa Elisabeth Day, dia niresaka tamin'ny Gretchen tamin'ny teny alemà. Ian Stevenson sy ny Andron'ny Andro dia nandrakotra ny resadresaka nifanaovany tamin'i Gretchen miady amin'ny fivoriana 19. Fehiny enina no voarakitra an-tsoratra. Ireo rakitsoratra ireo dia nahitana pejy 346 roapolo avo roa heny. Ny sora-bavaky ny fivoriana dia omena ao amin'ny appendice an'ny bokin'i Ian Stevenson, fiteny tsy fantatra.
Hita tao amin'ny "http://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=gretchen&oldid=15468420" Sokajy: Nampiasa teny manokana momba ny teny 237 izy talohan'ny nanambaran'ny olona hafa azy ireo, izay midika fa tsy resaka resaka fotsiny izy. Nandritra ny fotoam-pivoriana iray natokana dia nampidirin'i Gretchen teny alemà 120 izay tsy noresahan'ireo mpanadin-kevitra taloha, 96 izay tsy nitenenan'i Gretchen na mpanadinadina mihitsy hatramin'izay. Stevenson dia samy manana teny filamatra alemana telo manasonia fanambaràna milaza fa Gretchen dia tena niteny alemana.
Xenoglossy: Ian Stevenson dia nandidy an'i Dolores hanao fitsapana lainga momba ny lainga sy «Affidavits Signed-Dolores” izay tsy nianatra teny alemà velively
Araka ny nomarihina, Dolores Jay dia tsy nahalala ny teny alemana, ankoatra ny teny vitsivitsy toy ny "Nein", izay fantatry ny ankamaroan'ny Amerikanina. Noho izany dia miteraka tranganà xenoglossy izay ahafahan'ny olona iray miteny fiteny izay tsy nianatra tamin'ny fomba mahazatra. Ian Stevenson dia nanamarika fa tokony hianatra sy hampihatra ny fiteny amin'ny fotoana iray ny fiteny. Raha tsy nianatra tamin'ny fiteny vao teraka ny fiteny iray, dia tokony ho nianaran'izy ireo talohan'ny nahatongavana ho nofo izany.
Ian Stevenson dia nandeha lava be mba hibaiko fa mety ho nianatra tamin'ny teny alemana ny Dolores. Stevenson mihitsy aza dia nikarakara fanadihadiana momba ny polygraph, na ny mpitsabo mpangataka, tamin'ny febroary 5, 1974, i Dolores. Nandany ny fanandramana fametavetana lainga izy, niampanga fa tsy nianatra na nahalala alemà talohan'ny niantsoana an'i Gretchen.
Stevenson koa dia nanadinadina ny ray aman-drenin'i Dolores, Boyd sy Laura Skidmore, ary Maria rahavaviny. Ireo fanambarana telo nosoniavina izay tsy nisy olona azon'izy ireo niteny alemà ary tsy nisy olona niteny alemà tao amin'ny faritra nisy azy ireo.
Ankoatra izany, afaka nifampiresaka tamin'ny teny alemana i Gretchen tamin'ny fomba interactif; Afaka mahatakatra sy mamaly amin'ny teny Alemana izy. Ian Stevenson dia milaza ity endrika xenoglossy ity ho "xenoglossy mamaly," izay maneho fahatakarana mafy ny fiteny. Tamin'ny resaka nifanaovan'i Gretchen dia azony tsara ny Alemana sy ny Anglisy, saingy izy irery no niteny tamin'ny teny Alemana.
Ny fiainan'ny olona taloha: iza no Gretchen?
Tao amin'ny fivoriana, tsy dia niresaka firy i Gretchen, fa namaly tamim-pahamatorana kosa izy tamin'ny fanontaniana, toy ny tovovavy tsara toetra. Nilaza izy fa Gretchen Gottlieb no anarany ary niara-nipetraka tamin'ny rainy izy, Herman no anarany. Nolazainy fa efa antitra izy, sady fotsy hoditra. Gretchen dia mihomehy rehefa milaza ny rainy mitaingina soavaly iray. Nilaza izy fa maty i Erika, renin'i Gretchen fony 8 taona. Tsy nanana rahalahy na anabavy izy.
Nilaza i Gretchen fa ny Ben'ny tanànan'i Eberswalde, Alemana, no nipetrahany. Nilaza izy fa nonina teny amin'ny arabe antsoina hoe Birkenstrasse izy ireo. Gretchen dia nanoritsoritra an'i Eberwalde ho tanàna kely misy bakomangam-bokatra, fivarotan-tsakafo, fiangonana ary oniversite. Nisy ala sy renirano teo ivelan'ny tanàna. Niresaka momba ny tanànan'i Worms sy Wiesbaden koa izy.
Nitantara i Gretchen fa ho tonga ao an-tranony ny mpiasa iray antsoina hoe Frau Schilder mba hikarakarana sy hanadio. Gretchen dia nilaza fa ny vehivavy Schilder dia hitondra ny zanany efatra ho any an-tranon'ny Gottlieb ary hiaraka amin'ny ankizy izy, Gretchen. Raha ny marina, nilaza izy fa nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tao an-dakoziany, nikarakara ireo ankizy. Nomeny anarana ny efatra amin'izy ireo ary nilaza fa ny telo taona dia telo taona.
Nilaza i Gretchen fa tsy nandeha tany an-tsekoly mihitsy izy, izay ara-dalàna ho an'ny ankizivavy tamin'izany fotoana izany, ary tsy afaka namaky na nanoratra izy. Gretchen dia Katolika Romanina ary fantany fa ny Papa no lohan'ny fiangonana. Nanohitra ny Fanavaozana Protestanta izy ary niresaka imbetsaka tamin'i Martin Luther imbetsaka. Namerina ilay fehezanteny hoe "Martin Luther, mpamadika ny vahoaka, "imbetsaka. (3)
Matetika i Gretchen dia nampiseho tahotra sy paranoia rehefa niresaka momba ny Bundesrat. Ian Stevenson dia nanamarika fa ny federasiona dia Kabinetra iray any Alemana izay navitrika tamin'ny 1875-1900, izay nanan-kery satria tsy maintsy nankatoavina ny faktiora rehetra talohan'ny nahatongavany ho lalàna. Noho ny fanambarany momba ny Bundesrat, dia niaiky i Stevenson fa niaina tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 tany Alemaina i Gretchen, fony mbola nisy ny Bundesrat.
Nilaza i Gretchen fa maty tamin'ny taona 16 izy. Nilaza izy fa marary mafy amin'ny aretim-pivalanana voalohany. Hametraka ny tanany eo amin'ny lohany izy ary haneho endrika maneho ny fijaliana.
Tahaka ny ao amin'ny Sharada | Uttara Huddar Na izany aza, indraindray, i Gretchen dia tsy nahatsapa fa maty. Tao amin'ny fivoriana sasantsasany, nihevitra i Gretchen fa hiresaka amin'ireo mpanadinadina eny amin'ny arabe akaikin'ny tranony izy. Niangavy an'ireo mpanadinadina, toa an-dry Stevenson, izy, fa tsy maintsy mody izy, raha tezitra ny rainy raha mahita fa miresaka amin'ny olon-tsy fantatra.
Noho izany, ity dia miteraka tranga iray hafa izay ahafahan'ny fanahy iray mihazona toetra manokana iray taloha.
Fanamafisana ny fanambarana nataon'i Gretchen
Ian Stevenson dia nanandrana nanamafy ny filazan'i Gretchen. Araka ny efa nambara dia nifanakalo hevitra momba ny federat, izay tena kabinetra tany Alemana izay navitrika tamin'ny 1875-1900.
Efa nisy ny tanànan'i Eberswalde, saingy tsy nisy ben'ny tanàna tamin'ny anaran'i Gottlieb tao amin'ny rakitsoratra. Nieritreritra i Stevenson fa mety ho mpiasam-panjakana ambany kokoa ny rainy na mety ho zanakavavin'i Eberswalde, zazavavy tsy manara-dalàna, izay nomena anarana hoe Gottlieb taorian'ny nahaterahany. Azo atao ihany koa ny miresaka momba ny tanàna iray antsoina hoe Eberswald, Gretchen, izay nampidirina tao amin'ny tanàna lehibe iray.
Ny firaisana amin'ny vatana
Ian Stevenson dia nanandratra ny olana izay ny Gretchen Gottlieb | Ny tranga Dolores Jay dia mety maneho tranga iray, izay ahitan'i Gretchen fanahy marefo izay naka vatana Dolores Jay nandritra ny fotoana fohy. Ity adihevitra momba ny firaisana amin'ny vatana vaovao ity dia nodinihina tamin'ny antsipiriany tao amin'ny Sharada | Uttara Huddar raharaha xenoglossy.
Ireo tranga roa dia manohana ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao ho fanazavana momba ny xenoglossy an'ny Dolores Jay. Voalohany, tao amin'ny 1968, Dolores dia nanana nofy izay nitranga herintaona talohan'i Gretchen. Tao anatin'io nofy io i Dolores dia nahita tovovavy iray nipetraka teo amin'ny lasely iray tamin'ny soavaly iray, niaraka tamin'ny zokiolona iray an-tongotra. Olona maro no niara-nivory tamin-kery sy vato. Nisy lehilahy iray namakivaky ny vahoaka ary naka ny lamban'ny soavaliny. Tamin'izay fotoana izay dia nifoha i Dolores.
Ity nofy ity dia mampahatsiahy ny sehatr'asan'i Gretchen tatỳ aoriana momba ny fiainany. Nanazava ny rainy i Gretchen tamin'ny maha-zokiolona azy tamin'ny volon'ny fotsy ary nibitsika izy rehefa nilazalaza azy fa mitaingina soavaly izy. Nantsoiny koa i Martin Luther mpamaham-bolongana ary "mpamadika ny vahoaka." Ny fahatezeran'ny vahoaka tao anatin'ilay nofy dia mety haneho ny fifandonana mifandraika amin'ny Fanavaozana Protestanta tany Alemaina, izay notarihan'i Martin Luther. Sarin'ny Martin Luther dia nomena ny marina.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha dia matetika no hita ao amin'ny toetran'ny nofy ary toy izany, io nofinofy io dia hanohana ny fiverenan'ny vovoka ho toy ny fanazavana momba ny xenoglossy izay ampisehoan'i Dolores tatỳ aoriana.
Faharoa, nandritra ny fotoam-pitsapana hypnosis dia nanoro hevitra an'i Gretchen i Carroll Jay mba hanana fahitana azon'i Dolores amin'ny teny anglisy. Nilaza i Dolores avy eo, tamin'ny teny Anglisy fa hitany fa nentina tany amin'ny tanàna lavitra izy. Tao izy dia nahita lehilahy iray niresaka tamin'ny fiangonana. Niparitaka ny vahoaka ny polisy voaorina. Nisy ankizivavy iray sy lehilahy zokiolona, ​​izay angamba i Gretchen sy ny rainy, dia natahotra ary nandositra.
Raha nanontany ny Dolores izay ilay tovovavy tao amin'ilay fahitana ny vadiny, dia hoy i Dolores: "Izaho ity." (4)
Famaranana & Fanadihadiana tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Niara-niasa tamin'i Carroll sy Dolores Jay nandritra ny taona maro tao anatin'ity tranga xenoglossy ity, i Ian Stevenson dia afaka nahafantatra azy ireo tsara ary naharesy lahatra azy fa marin-toetra sy mivantana amin'ny fanambarany. Nomarihany fa mifanohitra amin'ny rafi-pinoana i Dolores, amin'ny maha-kristianina azy. Ny vadin'i Carroll, dia nahita fa "nalahelo sy natahotra" i Dolores, noho ny fahaizany miteny anglisy. (5)
Carroll Jay koa dia niady tamin'ny xenoglossy ny vadiny, satria mahatonga azy ho sarotra ho azy ny maha-Ministra Kristiana azy. Tamin'ny Janoary 20, 1975, ny Washington Post dia namoaka lahatsoratra momba ny xenoglossy nasehon'i Dolores. Rehefa namaky ilay lahatsoratra ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamoniny, dia ny sasany tamin'izy ireo no niampanga ny Jays tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny devoly.
Amin'ny ankapobeny, Ian Stevenson, MD, dia tsy nahita ny antony hitenenan'ny Jays na ny fianakaviany fanambarana diso ary nino izy fa raharaha ratsy xenoglossy. Raha raisina ho toy ny fanazavana ny firaisana amin'ny vatana vaovao, dia hitantsika fa ny talenta, anisan'izany ny fahaizana miteny ny fiteny, dia azo alaina avy amin'ny fampidirana iray hafa.
Ankoatra izany, rehefa nipoitra tamin'ny endriny manokana i Gretchen, niaraka tamin'ny fandinihana fa indraindray tsy tsapany fa maty izy, ity tranga ity dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny fanahy mitazona ny toetrany. Io tranga io koa dia hita ao amin'ny Sharada | Uttara Huddar ary Jensen Jacoby | TE ny famerenana amin'ny laoniny xenoglossy ary resahina ao Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana.
Xenoglossy: Afaka miteny sy mamaly amin'ny teny alemà ny Dolores Jay noho ny hypnose, fiteny izay tsy azony tao amin'ny fahatsiarovan-tena nahatsiaro azy. Toa toa i Dolores no nanatona an'io fahaizana io nandritra ny fiainany taloha tahaka an'i Gretchen.
Mitazona ny toetran'ny olona miaraka amin'ny fanahy: Rehefa nihalehibe i Gretchen, dia toy ny tovovavy tsara tantana izy. Eny tokoa, tahaka ny tao amin'ny Sharada | Ny raharaha Uttara Huddar, indraindray dia toa tsy nahatsapa i Gretchen fa maty izy. Tao amin'ny fivoriana sasantsasany, nihevitra i Gretchen fa hiresaka amin'ireo mpanadinadina eny amin'ny arabe akaikin'ny tranony izy.
Fiovan'ny maha-olona sy ny finoana: Gretchen dia Alemana, raha Dolores kosa dia olom-pirenen'i Etazonia. Niova ihany koa ny fiaraha-monina ara-pinoana, satria nifanaraka tsara tamin'ny Fiangonana Katolika i Gretchen ary nanohitra ny Fanavaozana Protestanta. Mifanohitra amin'izany kosa, ny Jays dia Methodist, izay nitombo tamin'ny hetsika fanavaozana tany Angletera.
Azafady mba mariho fa ny sary atolotra etsy ambony misolo tena an'i Carroll sy Dolores Jay, ary koa ny rain'i Gretchen, dia tsy sary ara-tantara, fa tantara an-tsehatra ireo.